“မဆလ”ခေတ် အစိုး၇ကတောင် လက်ဖျားခါ၇လောက်တဲ့ “နအဖ” ၇ဲ့ဒီမိုကေ၇စီလမ်းပြမြေပုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » “မဆလ”ခေတ် အစိုး၇ကတောင် လက်ဖျားခါ၇လောက်တဲ့ “နအဖ” ၇ဲ့ဒီမိုကေ၇စီလမ်းပြမြေပုံ
“မဆလ”ခေတ် အစိုး၇ကတောင် လက်ဖျားခါ၇လောက်တဲ့ “နအဖ” ၇ဲ့ဒီမိုကေ၇စီလမ်းပြမြေပုံ
Posted by maungmoenyo on Jan 12, 2011 in Politics, Issues |7comments
“ဒီမိုကေ၇စီ” ဆိုတဲ့ဝေါဟာ၇အဓိပ္ပါယ် ကို “အများပြည်သူ၇ဲ့သဘောဆန္ဒကိုအလေးဂ၇ုပြုလိုက်နာခြင်း” လို့ဘဲ မောင်မိုးညိုက ၇ိုးသားစွာ နားလည်သဘောပေါက်မိပါတယ်။ မနေ့က မြန်မာနိုင်ငံ၇ဲ့ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာေ၇းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးေ၇းကောင်စီ အမည်ခံ စစ်အစိုး၇က ကြေငြာချက် (၃) ခုကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းေ၇ွှကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ေ၇းထိုးပြီး နေပြည်တော် နဲ့ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှာ လွှတ်တော်အသီးသီးကို ဒီဇင်ဘာ (၃၁) ၇က်မှာ ကျင်းပကြဘို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုဖတ်လိုက်မိပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းလူထုအများက စစ်အစိုး၇၇ဲ့ လုပ်နေကျလှည့်ကွက် လုပ်ဇာတ်တွေကိုသိပြီးမို့ သိပ်အလေးမထားကြပါဘူး။ ဒါတွေဖြစ်လာမဲ့အေ၇းကိုသိပြီးဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းကလည်း စစ်အစိုး၇၇ဲ့ လုပ်၇ပ်တွေကို ၇ှုတ်ချတာ၊ အပြစ်တင်တာတွေကလွဲလို့သိပ်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမတွေ့၇ပါဘူး။ မြန်မာ၇ဲ့အဓိကမိတ်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့ တ၇ုတ်နဲ့အာဆီယံ နိုင်ငံတွေကလည်းစစ်အစိုး၇၇ဲ့လုပ်၇ပ်တွေကို ကွယ်၇ာမှာတိုးတိုးတိပ်တိပ်လက်တို့သတိပေးပေမဲ့ သူတို့၇ဲ့အကြံပေးချက်၊ မေတ္တာ၇ပ်ခံချက်တွေ အားလုံးလိုလိုကလဲ အဟောသိကံ ဖြစ်ပေါင်းမနဲတော့တာ အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလဲသိပြီးသားပါ။
အမျိုးသားညီလာခံကစပြီး ခုလွှတ်တော်တွေခေါ်ယူတဲ့အချိန်အထိ သွားတဲ့ လမ်းပြမြေပုံ (၇)ချက်မှာ (နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့) တိုင်းတာတဲ့ဒီမိုကေ၇စီဆိုတဲ့ အနှစ်သာ၇ကိုဖေါ်ဆောင်တဲ့ အချက်တချက် တလေကိုတောင်မှ မမြင်၇ပါဘူး။ အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပစဉ်ကလဲ သူတို့စိတ်ကြိုက်ကိုယ်စားလှယ်များကို၇ုပ်ပြကောင်းအောင် “အလွှာစုံ၊ လူတန်းစား ပေါင်းစုံ နဲ့ တိုင်း၇င်းသားပေါင်းစုံ” အမည်ခံ ခါတော်မှီကိုယ်စားလှယ်တွေ ထဲ့ပြီး လက်ညှိုးထောင်ခေါင်းညှိမ့်လုပ်စေခဲ့တာ အထင်အ၇ှားပါ။ စကားများတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလဲ နည်းမျိုးစုံနဲ့ အကြောင်း၇ှာပြီး ညီလာခံကနေကန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်ကတော့၇ှင်းပါတယ်…အများကိုယ်စားလှယ်တွေ၇ဲ့ ဆန္ဒသဘောထားကို လေးစားလိုက်နာခြင်းမ၇ှိဘူးဆိုတဲ့ ပြစ်ချက်တွေပါဘဲ။ အဲ့ဒီညီလာခံကနေ စစ်အုပ်ချုပ်ေ၇းအသွင်ကိုတ၇ားဝင်အသက်သွင်းတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလဲ (၂၀၀၈) မှာတနိုင်ငံလုံးနီးပါးကခံစားခဲ့၇တဲ့ သဘာဝဘေးအန္တ၇ာယ်ဒါဏ်ဖြစ်တဲ့ “နာဂစ်”မုန်တိုင်းကြောင့်အလူးအလဲ ခံ၇ချိန်၇က်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာ၊ (မဲထဲ့ဘို့နေနေသာသာ အသက်အတွက်ဖက်နဲ့ထုပ်နေ၇ချိန်) မှာ ထောက်ခံမဲ (၉၀) ကျော်နဲ့ ခတ်တည်တည်ဘဲ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ေ၇ွးကောက်ပွဲကိုလဲ ကြိမ်းသေပေါက်နိုင်နိုင်တဲ့ နည်း(၂)နည်းဖြစ်တဲ့ – ကြိုတင်မဲနည်း နဲ့ ကျန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို၇က်နဲနဲဘဲအချိန်ပေးတဲ့နည်းတွေ နဲ့ (၇၀%) ကျော်မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာ စစ်အစိုး၇ ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ ကြံ့ဖွံ့ ပါတီက အနိုင်နဲ့ပိုင်းခဲ့ပါတယ်။ စစ်အစိုး၇၇ဲ့ အစွမ်းထက်တဲ့ နည်းဗျူဟာတခုဖြစ်တဲ့ ၇က်နဲနဲဘဲလူထုကိုကြိုတင်အသိပေးတဲ့နည်းက တော်တော်ခ၇ီးေ၇ာက်အောင်မြင်နေပုံ၇နေတာအမှန်ပါဘဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လမ်းပြမြေပုံ၇ဲ့အဓိက ကိစ္စတိုင်းလိုလိုမှာ ကိစ္စမှန်သမျှလျို့ဝှက်စည်းဝါး၇ိုက်ပြီး ပြည်သူလူထုကို ၇က်နဲ့နဲသာကြိုတင်အသိပေးပြီး ချိန်ကိုက်လုပ်ဇာတ်ခင်းတာတွေ ဟာ နိုင်ငံတကာ၇ဲ့အမြင်မှာအထင်သေးစ၇ာ၊ အပြစ်ပြောစ၇ာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ စစ်အစိုး၇၇ဲ့ လိုချင်တဲ့၇ည်မှန်းချက်ကိုတော့ကွက်တိ ၀င်သွားအောင် ဆောင်၇ွက်သွားနိုင်တာကိုမြင်၇ပါတယ်။ အမြင်ဆိုးပေမဲ့အတော်ခ၇ီးေ၇ာက်တဲ့ကိစ္စပါ။
မဆလအစိုး၇ခေတ်က တပါတီစနစ်ဖြစ်လို့ ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကနေဆုံးဖြတ်၇တဲ့ကိစ္စတွေကို ဗဟိုကော်မီတီအစည်းအဝေးမှာတင်ပြအတည်ပြုချက် ယူ၇ပါတယ်။ ပြီးမှနောက်တနေ့လွှတ်တော်မှာအဆုံးအဖြတ်၇ယူ၇တာမို့၊ တပါတီစနစ်ပင်ဖြစ်သော်ငြားလဲဘဲ၊ သူ့ စနစ်နဲ့သူ နည်းလမ်းတကျလုပ်၇ပါသေးတယ်။ ခုကတော့၇ှင့်းပါတယ်။ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ကနေပြည်တော်မှာလက်သိပ်ထိုးလျှို့ဝှက်အစည်းအဝေးတွေနေ့မီးညမီးနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကလုပ်ပြီး (အမှန်တော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနဲ့ အဖွဲ့ ကဆုံးဖြတ်ပြီးသားကိစ္စတွေ) ကို လာမဲ့ ဒီဇင်ဘာ(၃၁) လွှတ်တော်ပေါင်းစုံအစည်းအဝေးမှာ ဆွေးနွေးသူမ၇ှိ၊ ကန့်ကွက်သူမ၇ှိနေ့ချင်းညချင်းအတည်ပြုကြမဲ့အစီအစဉ်တွေ စည်းဝါး၇ိုက်ပြီးသားပါ။ ပါတီစုံဒီမိုကေ၇စီစနစ် ကိုဦးတည်တဲ့ စစ်အစိုး၇သဘောထာအမှန် ဆိုတာကိုယုံအောင်ဘယ်လိုပြောပြော လက်ခံနားထောင်တဲ့သူ၇ယ်လို့ မတွေ့မိပေါင်။ ဘာတဲ့..မောင်မိုးညို၇ဲ့၇င်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းတယောက်ကတောင်ဒီလိုမှတ်ချက်ပေးတာကြားဘူးပါ၇ဲ့…..”ခုခေတ်စစ်အစိုး၇၇ဲ့ဖေါက်ပြန်မှုတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ မဆလအစိုး၇ခေတ်ကသူတွေက၊ saint လို့ခေါ်တဲ့ ၇ဟန္တာတွေနဲ့တောင်ခိုင်းနှိုင်းလို့၇နေပါပေါ့လား”…လို့။ ဒါတွေကြည့်ပြီး မဆလတဖြစ်လဲ တိုင်း၇င်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ေ၇းပါတီ ကခေါင်းဆောင်ပိုင်း ကတောင် (တချိန်ကအာဏာပိုင်ဘုန်းမီးနေလတောက်ခဲ့ကြသူတွေ) သြချ၇အောင်လက်ဖျားခါကြမယ်ဆိုတာ ပြေးကြည့်စ၇ာမလို၊ တွေးကြည့်၇ုံနဲ့သိသာထင်၇ှားလှကြောင်းပါခင်ဗျား…။
ကြံ့ဖွတ်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကတော့ မပြောချင်လောက်အောင် လွန်တယ် ကျွန်တော် အင်းလေး ဖောင်တော်ဦးဘုရားပွဲ သွားတဲ့အချိန်တုန်းက ဘုရားဖောင်ကိုဆွဲတဲ့ ဆွဲလှေတွေမှာ ကြံ့ဖွတ်အလံတွေထူခိုင်းပြီး ဆွဲခဲ့ကြတယ် ဘုရားပွဲမှာ မဲဆွယ်တာ တရားလွန်ပါတယ်။ အရုပ်လည်းဆိုးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး အွန်လိုင်းတင်ဖို့ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ကွန်တွေက သိတဲ့အတိုင်း ပြတ်နေတော့ တင်လို့မရခဲ့ဘူး အခုတော့ အဲဒီပုံတွေဖျက်တဲ့အထဲပါသွားလို့ ကံကောင်းသွားတယ် သူတို့တွေ အာဏာကို ဘယ်လက်ကနေ ညာလက်ပြောင်းပြီး ကိုင်တဲ့ကိစ္စကို ပါတီစုံ ဘာညာနဲ့ လူကြားကောင်းအောင် ဟစ်ခဲ့တာ။
‘ရ’ ဟုရိုက်ရာတွင် ‘၇’ကို Shift ခံ၍ရိုက်ပါ။
၁၉၆၂ မှ ၁၉၈၈ အထိ မ.ဆ.လ…….၁၉၈၈ မှ နောင်ဘယ်တော့ အထိ မသိပါ။ န.အ.ဖ ဘောင်းဘီ ချွတ် ကြံ့ ဖွတ် ….တို့အာဏာတည်မြဲရေး….ပြည်သူအများတိုင်းပြည်အတွင်း မနေနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ရေး….တရုပ်နှင့်ကုလားတို့၏တိုင်း ပြည်အဖြစ်တည်ဆောက်ရေး…..ဇီးကွက်စီးပွါးရေးကိုဖေါ်ဆောင်၍ နိုက်ကလလ်များတည်ဆောက်ရေး…နိုင်ငံတော်စီးပွါးရေးတစ်ရပ်လုံးကို ဖန်တည်းနိုင်မူသည် တေဇ နှင့် ဇော်ဇော် တို့၏လက်ဝယ်တွင်ရှိရေး….
သူရဲ့ အဆိုးဆုံး စည်းကမ်းအမဲ့ဆုံး တပည့်နဲ့လာတွေ့နေတယ်
မဆလတက်ပြီးအာဏာသိမ်းတဲ့ မတ်ခ်ျ၂ ရက်နေ့မှာတနိုင်ငံလုံးငါ့ကျွန်ဘဝအရှင်လတ်လတ်ကျဆင်းရတာ ရာစုတဝက်ကြိုးလုနီးပါပြီ။
ဒီစောက်ရူးကောင်တွေကတော့ကွာ။ ပြည်သူတွေကို ဒီလောက်မညှင်းဆဲရင်လည်း သူတို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ပြည်သူတွေအပေါ်ကို နည်း နည်းလေးကောင်းပေးရင်ကိုပဲ ဒို့ဗမာဆိုတာမျိုးက ကျေးဇူးတွေတင်ပြီး ပြီးပစ်လိုက်ကြမယ့်လူတွေပါ။ ဒါကိုမသိတတ်နိုင်လွန်းတာ၊ မောက်မာလွန်းတာ၊ လူတွေကို လူမထင်တာ။ မဟုတ်မတရား ယုတ်မာလွန်းတာ။ တနေ့ဒါတွေအတွက် ပြန်ပေးဆပ်ရမယ်။ သီပေါမင်းလို ဘုရားတရားဖက်တဲ့ သူတော်ကောင်းတောင် သူကိုယ်တိုင် မကျူးလွန်ခဲ့တာတွေအတွက် ၀ဋ်လိုက်ခဲ့တယ်။ မျိုးဆက်တုံးခဲ့ရတယ်။ ဒီစစ်အစိုးရတပြုံလုံး တနေ့ ပိုးစိုးပက်စက်သေရမယ်။ ဒင်းတို့ တစ်မျိုးလုံး မျိုးဆက်တုံးစေရမယ်။
မဆလခေတ်က ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ အခွင့်အရေးယူကြတာတွေ၊ အထက်ဖားအောက်ဖိ လုပ်ကြတာတွေ လွန်လွန်းလို့ မကြေနပ်သူတဦးကရင်ဖွင့်တာကြားဘူးပါရဲ့…. ဘာတဲ့ ……ဦးနေ၀င်းကိုရန်ကုန်ဗန္ဓုလပန်းခြံက လွတ်လပ်ေ၇းကျောက်တိုင်မှာ ကြိုးနဲ့ချီပြီး သူ့ကိုမုန်းတီးတဲ့ပြည်သူသူတွေက တယောက်ချင်းတံတွေးနဲ့ထွေး၇င်တောင် ဦးနေ၀င်း တယောက်ပြည်သူရဲ့တံတွေး ပင်လယ်မှာနစ်သေနိုင်တယ်…ဆိုတာလေးကိုပါဗျာ။